Abaphenyi beNoveli: Ngaba kukho ukufana kwinyani? | Uncwadi lwangoku
Abaphenyi beNoveli: Ngaba kukho ukufana okwenyani?
Abecuphi babucala: Ndingenza ntoni xa ndifumana isidumbu?
Ukusuka kuSherlock Holmes ukuya ePepe Carvalho ukuya eHercule Poirot, uPhillip Marlowe okanye iCormoran Strike yamva nje, sonke sinombono wento eyenziwa ngumcuphi wabucala kwiintloko zethu.
Abafana abomeleleyo okanye hayi kangako, abaphanda ngesicelo somthengi okanye ngento yobuqu engavalwanga, ityala elinobundlongondlongo apho kuhlala kukho isidumbu esinye okanye nangaphezulu kwaye ezinye zimbi kakhulu kangangokuba ziphela zibanjwa.
1 "Tata, Mama, ndizakufunda umcuphi"
2 Umcuphi kunye nabantu ababi.
3 Abacuphi abangenalo elidlulileyo kwi-mugshot.
4 UPerry Mason akasebenzi.
5 Abacuphi abanezakhono zokutshixa.
6 Abakwishumi elivisayo kwaye sele bengabacuphi.
7 Unokwenza ntoni umcuphi?
"Tata, Mama, ndizakufunda umcuphi"
Bambalwa kuthi abaziyo ukuba eSpain, ukuba unyana wethu usixelela xa efika kwi-Baccalaureate: «Tata, Mama, ndiza kufunda umcuphi», kusengqiqweni ngokungathi usixelela ukuba ufuna ukufundela ubugqirha okanye ubuNjineli , kuba ikho isidanga esisemthethweni kuMcuphi wabucala, isidanga seDyunivesithi, esinokufikelelwa kwiiyunivesithi ezininzi zaseSpain kwaye sinokufundwa ukude, kwiUNED, kwaye Imfuneko esemthethweni yomthetho yokuziqhelanisa nomcuphi wabucala. Naluphi na olunye ukhetho kukungenelela ngobuchule.
Umcuphi kunye nabantu ababi.
Abacuphi beenoveli baphanda ikakhulu ukubulala, nkqu nabantu abathanda ukubanjwa, abanjengoTata uBrown okanye uDupin (Poe's, hayi uJean-Luc Bannalec, ongomnye wamapolisa aseFrance) uBill Hodges okanye uLisbeth Salander. E-Spain ngekhe kwenzeke abacuphi babucala abanakho ukuphanda ulwaphulo-mthetho olunokutshutshiswa ex officioOko kukuthi, abo ubulungisa bulandela nokuba akukho mntu ubugwebayo, njengokubulala. Ukuba umcuphi waseSpain ufumene ukubulala ngexesha lophando, uxanduva lwakhe olusemthethweni kukuxela kwaye anikezele emapoliseni lonke ulwazi analo. Ukuba akunjalo, ubungqina obufunyenwe ngaba baphenyi bungabhengezwa njengobulilize. U-Stieg Larson wayezogqitha engcwabeni lakhe xa efumanisa ukuba kuya kufuneka ayikhulule i-psychopath ejongene nesibindi sakhe u-Lisbeth Salander ngenxa yokungabinabungqina obugwebayo. Ngesi sizathu, kwinoveli yolwaphulo-mthetho yaseSpain, abacuphi bahlala bengamapolisa okanye oonogada bakarhulumente.
Abacuphi abangenalo elidlulileyo kwi-mugshot.
Abanye babecuphi abaziwayo kwihlabathi loncwadi baye babalelwa ngaphezulu komthetho. Kwinyani akukho mntu unetyala ulwaphulo-mthetho lobuqhetseba, okanye nxamnye nembeko, umfanekiso, njl. unokuba ngumcuphi. Jonga uMarlowe, owalelwe ukwaphula umthetho!
UPerry Mason akasebenzi.
E-Spain ubuchwephesha bunokwenziwa kuphela kwi-arhente yabecuphi, kwaye ngenxa yoku kufuneka ube ngumcuphi. Akwenzeki, umzekelo, ukuba ligqwetha, ngaphandle kokuba naye unesidanga somcuphi kunye nelayisensi ukongeza kwelegqwetha. Kwelinye icala, ibiya kuba yintoni uhlobo olumnyama ukuba uPerry Mason ebengekho?
Abacuphi abanezakhono zokutshixa.
Indawo yomcuphi ongenakuxhathisa nakuphi na ukutshixa aze akhangele ubungqina endlwini yomrhanelwa ixhaphake kangangokuba iyadideka ezingqondweni zethu xa sizama ukukhumbula omnye. Intsomi kule meko ingaphezulu kwenyani, umphandi wabucala akanakuze enze uphando kwicandelo labucala Akukho mntu kwaye kubandakanya idilesi. Yintoni egqithisile Ukungena ngaphandle kwemvume yomrhanelwa lulwaphulo-mthetho Ukuqhekeza apho ungaphulukana nelayisensi yakho. Nokuba eKuyenzeka ukuba uphande kwiindawo ezibekelwe bucala njengegumbi lasehotele okanye uphazamisane nonxibelelwano oluyimfihlo.
Abakwishumi elivisayo kwaye sele bengabacuphi.
Ukusuka kwabahlanu okanye uGuillermo, kumcuphi, sifika ngoku kunye noBerta Mir okanye uNik Mallory ophanda ukubulawa kukayise, ehamba ngeziganeko zokuqala zikaSherlock Holmes xa wayesekwishumi elivisayo. Ngelishwa, bonke Kuya kufuneka balinde de babe badala kwaye bagqibe eyunivesithi ukuze bakwazi ukwenza uqeqesho abanomdla kulo, nangona kungekho kubi ukuziqhelanisa kodwa, ewe, ngaphandle kokophula umthetho.
Unokwenza ntoni umcuphi?
Eyona misebenzi iqhelekileyo yomcuphi eSpain yile:
Kubathengi babucala: Phanda indlela yokuziphatha abantwana bayalelwe ngabazali babo okanye baphande ukungathembeki kwiqabane eloniweyo.
Yolawulo lukarhulumente kunye neenkampani zeinshurensi: Phanda buqhetseba, ukusukela ekuxokiseni amaxwebhu ukuze ndifumane indawo kwisikolo esidibeneyo, ekuqokeleleni imali yoluntu ngobuqhetseba, ukuya ikhefu lokugula elingelolonyani ixesha elide okanye ukukhubazeka.
Kwaye iikhomishini zeenkampani zihlala kwinxalenye enkulu yophando: Ukhuphiswano olungenabulungisa, amalungelo awodwa omenzi wechiza, ukubhengezwa ngokungabinamali, ukuphakamisa ipropathi, izivumelwano kunye nabatyali mali bamanye amazwe, ukuphanga kwiindawo zokugcina iimpahla okanye ukungabikho kwabaqeqeshiweyo.
Okokugqibela, inyani enomdla: eSpain, I-30% yabacuphi ngabasetyhini kwaye iyanda, ngoba? Kuba abafazi abathandabuzi kangako, ke zilumkele iingcinga ezibaxayo: Ukuba unayo nayiphi na imfihlo, lumka! ukuba kungenzeka ukuba umama wendlu owele kuye kwivenkile ngumphandi wabucala okujongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Abaphenyi beNoveli: Ngaba kukho ukufana okwenyani?
URafael Guerrero obambe umfanekiso sitsho
Inqaku elihle libhalwe kakuhle. Ndiyakuvuyela
URafael Guerrero obambe umfanekiso
Phendula kuRafael Guerrero
Iminyaka engama-34 ngaphandle kweCortázar: Eyona mibhalo yakhe mGqibeleleyo